UMnyango Wezokuvakasha eMalawi ufinyelela emakethe yezokuvakasha nezokuvakasha yaseMelika
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » izinhlangano » UMnyango Wezokuvakasha eMalawi ufinyelela emakethe yezokuvakasha nezokuvakasha yaseMelika
UMnyango Wezokuvakasha waseMalawi, ingxenye yoMnyango Wezimboni, Wezohwebo Nezokuvakasha waseMalawi, uqoke umxhumanisi waseMelika i-CornerSun Destination Marketing njenge-ejensi yabo yamarekhodi eNyakatho Melika.
I-CornerSun izogxila ekwakheni isu lokungena ezimakethe laseMalawi elilinganisa ngokuyinhloko ithuba emakethe futhi lisungula ukuba khona kweMalawi eNyakatho Melika kanye nezinye izindawo zase-Afrika ezithuthukile eminyakeni yamuva nje, njengeNingizimu Afrika.
Idume ngobungane babantu bayo, iMalawi yaziwa ngokuthi yi-Warm Heart of Africa. Leli gugu elaziwa kancane linokuningi ongakunikeza okuhlanganisa izilwane zasendle, isiko, uhambo, indawo, kanye neLake elikhulu laseMalawi. Indawo okuya kuyo unyaka wonke, abaningi bayibheka njengezwe elikhanga kakhulu e-Afrika eseningizimu yeSahara.
Ezokuvakasha zaseMalawi ziye zaba nentuthuko engakaze ibonwe eminyakeni yamuva nje. Amaloji amasha avuliwe futhi amahhotela akhona kakade anwetshiwe futhi athuthukiswa. Ingqalasizinda yezokuvakasha isalokhu iyingcosana ngesilinganiso kodwa isezingeni eliphezulu. Ubambiswano olusha lwezinkampani ezizimele luvikele ikusasa lezilwane zasendle zezwe ngezinhlelo zokongiwa kwemvelo kanye nezinhlelo zokubuyisela isitokwe ngesikhathi esifanayo kuthuthukiswa ulwazi lwe-safari. Konke lokhu kuhlangene nokutshalwa kwezimali okusha kwingqalasizinda yendawo kwenze iMalawi yaba indawo yokuqala yezwekazi yezokuvakasha.
“Njengoba abantu baseMelika bevakashela e-Afrika ngamanani aqoshiwe futhi belokhu befuna izindawo ezingakatholwa ezinikeza ulwazi oluseqophelweni eliphezulu, asikaze sibe khona isikhathi esijabulisa kakhulu eMalawi” kusho uMqondisi Ophethe iCornerSun, uDavid DiGregorio. Uqhube wathi, “Sizizwa sihloniphekile ngokumela indawo okuhloswe ukuthi ibe ngenye yezindawo ezidingeka kakhulu kubahambi baseMelika abanolwazi abafuna inhlanganisela emangalisayo yeminikelo esezingeni lomhlaba yemvelo, amasiko kanye nezilwane zasendle”.
Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana neminikelo ecebile nehlukahlukene yaseMalawi vakashela http://www.visitmalawi.mw, landela i-@TourismMalawi ku-Twitter naku-Malawi Tourism ku-Facebook.
Inguqulo yesi-5 ye-Chengdu International Tourism Expo Iphetha Ngempumelelo
Ucabanga ukuthi uyazi isicebi sehhotela "uBill" Marriott?
Imikhumbi yaseRussia ayisamukeli emachwebeni ase-US